Policewoman - Pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy
Keyword: vehivavy polisy
Polisy famaritana asa | Polisy sy vehivavy
Natokana ho an'ireo mpitandro ny filaminana tsara sy miasa rehetra any! Misaotra anao amin'ny rehetra.
Ireo "zanakay" manokana indrindra dia manonofy ny ho lasa polisy any aoriana. Na eo aza izany dia mihamaro ihany koa ireo "tovovavy kely" azontsika an-tsaina an'io asa io.
Ny polisy, ny namanao ary mpanampy anao
Tsy mahagaga izany, satria ny asan'ny polisy dia tena samihafa. Tsy mandeha mivezivezy amin'ny fiarany mahafinaritra fotsiny izy ireo ary manoratra ireo mpandika fijanonana isaky ny miverina. Azo antoka fa izany no iray amin'ireo asa mora indrindra tokony hofehezinao.
Inona no tena ataon'ny polisy? - Sarin'i Arek Socha amin'ny pixel
Etsy andanin'izay, ireo andriambavilanitra sy polisy dia mitondra moto ihany koa. Any amin'ny faritra sasany aza dia misy mpitandro ny filaminana mitaingina soavaly ampiasaina indray.
Vao mainka manaitaitra ny saina rehefa voantso amin'ny vaky trano na fandrobana banky ianao. Iza no mahalala, mety ho tratran'izy ireo ilay nahavanon-doza. Na dia afa-mandositra aza ilay olon-dratsy, dia mety hahafinaritra ny mahita azy.
“Famaritana ny asan'ny polisy | Polisy " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 22. Oktobra 2020 23. Oktobra 2020 Sokajy fampianaranaKeywords asa, Namana sy mpanampy, polisy, biraon'ny polisy, vehivavy polisyLeave a Comment ny famaritana ny asa polisy | Polisy sy vehivavy